WEBTALK INVITE: ⚠️ Guo nke a tupu ịdebanye aha gị! ⚠️ - 💌 WebTK - Ticket gi ka WebTalK 🚀 Kpọọ, Nyochaa, Akụkọ & ọzọ 🔥
WEBTALK INVITE: ⚠️ Guo nke a tupu ịdebanye aha gị! ⚠️
Mgbe na-esonye Webtalk nwere ike dị ka ezigbo echiche (lee nyocha nke omimi), enwere otu mkpebi nke nwere ike ịgbanwe ndụ gị n'ezie: iso ndi otu aka-nri.
Ndị otu aka nri bụ nke ọ bụghị naanị na-enye gị nkwado pụrụ iche ma nyere gị aka ime nke ọma na ya Webtalk, kamakwa enye gi a UNIQUE TEAM PUPU BONUS : Ndi otu uzo ndi 50% n’ego ndu. Nke ahụ bụ 50% n’elu nke Webtalk ma ọ pụtara na ị nwere ike ịnweta ihe nlele $ 1,000 n'enweghị ọtụtụ akwụkwọ nnọchiteanya, naanị n'ihi na ị bụ akụkụ nke NA WEBTALK STARS TEAM. 🏆🏆🏆
Mkpebi gị dị mkpa ka gị enweghị ike ịgbanwe otu ma emesịa, ewezuga ma ọ bụrụ na imepụta akaụntụ ọhụrụ wee mechie nke ochie.
Site na 3,000 + ndị òtù na-eto eto ma na-eto eto, ma na-elekwasị anya na ndị ọkachamara na ndị na-emepụta ọgwụ na nkwado VIP raara onwe ha nye, Webtalk Stars Team bụ nkwa iji nweta nsonaazụ kacha mma na Webtalk, tinyere ọnụọgụ ego na-enwetawanye ohere.
Nwelite (2019 / 08): anyị kesara ozi mbụ anyị n’ọnwa a 😀 Lee lee obi ụtọ Iloanya na-enweta nyefe ego ya n'ụlọ akụ si Webtalk Stars Team Nke a bụ mmalite: dị ka ego anyị na-enweta na-abawanye, otu a ka anyị ga-esi enye kwa ọnwa! Anyị na-atụ anya idozi nde dollar n’afọ na-abịanụ. 🤑
Nke a bụ etu Webtalk Stars Team na-ezube ịkesa ya ego:
Team Webtalk Stars Ego Nweta Mmemme
Ugbu a mkpebi dị gị n’aka: ị ga - eme sonye n'agba kacha mma maka Webtalk?
Webtalk bụ ihe mgbasa ozi mmekọrịta ọhaneze na - ejikọta Facebook kachasị mma, LinkedIn, Instagram, Slack, YouTube na ndị ọzọ n'otu ikpo okwu. Ọ na-enye mmemme mmemme pụrụ iche riri ọnụ a na-akpọ Social CPX: ụlọ ọrụ ahụ ga-ekenyeghachi 50% nke uru ya nye ndị ọrụ ya bụ isi, dịka mụ na gị, dabere na ọnụọgụgụ ndị ha na-ekwu maka ya. Webtalk. Lee nke anyi onye mgbakoro ego di elu ka ịmatakwu banyere ego ị ga-enweta.
The Webtalk Stars Team na-agbakwụnye usoro mmeghe nke aka ya n’elu nke Webtalk: anyị na-atụgharị 50% nke kọmitii ọrụ kwa ọnwa nye ndị otu anyị na ndị ọrụ enyemaka. Nke ahụ ruru $ 1000 kwa ọnwa na ndị ọzọ maka ndị otu anyị n'afọ na-abịanụ! Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka sonye na ezigbo egwuregwu, naanị otu egwuregwu nke na-enye gị ezigbo ohere inweta ego na ya kachasị elu nke Webtalk. 😄
Gịnị bụ Webtalk gịnịkwa mere m ga-eji sonye taa?
Manọgide na-enwe onwe gị, ọkachamara na ndụ azụmahịa n'ịntanetị aghọwo ọrụ na-agwụ ike.
Nhọrọ dị iche iche emeela ọtụtụ mgbagwoju anya n'enweghị onye ọ bụla yiri ka ọ na-enye gị ikikere nke nkwurịta okwu ịchọrọ.
Webtalk bụ nke mbụ na-ekwurịta okwu, mmekorita na azụmahịa netwọk obodo wuru iji nyere gị aka ikwurịta okwu ọma ma chekwaa oge.
na Webtalk, ị na-eme ka mmekọrịta dịkwuo mma na nkwurịta okwu ndị ọzọ na-ahụ anya, na-eme ka i nwee ike ịtụkwasị obi ma na-eduzi azụmahịa gị nke ọma site na igwe ojii nke na-eme ka ị nwee ike ịhazi gị onwe gị, ọrụ ọkachamara na ịzụ ahịa.
Webtalk eme ka ị chịkwaa onye na-ahụ ihe na mgbe. Ọdịmma mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị enyi na ezinụlọ gị na otu netwọk ahụ dị ugbu a agafeela.
Ijikwa nkwurịta okwu gị ka mma site na ijikwa kọntaktị gị mma.
Webtalkusoro ntinye aka na nchedo na-enyere gị aka ịkpọ njikọ gị dabere na mmekọrịta dị adị.
Mgbe ị na-arụ njikọ ọhụrụ Webtalk, ị nwere ike ịkọ njikọ ọkachamara dịka ihe ị chọrọ ịchọta maka ahịa, ọrụ, ịzụ ahịa na ohere ịnweta ohere Webtalkndị otu n'ime ụlọ ọrụ na ndị ọrụ nchịkọta nke nta, wee tinye isiokwu na nkọwapụta iji nye aka ịchọ onye ahụ n'ọdịnihu na ndekọ nlekọta njikwa gị.
Na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, netwọk onwe onye na nke ọha na eze, Webtalk enyere gị aka ijikwa ndụ gị n'ịntanetị dị ka ị ga-adị ndụ n'ezie.
Iwusi na ijigidesi ike bu ihe bara oke uru na ihe nile nke ndu gi.
Ya kpatara Webtalk na-enye gị ohere igosipụta talent gị site na megharia mmalite na ụlọ ọrụ mgbasa ozi igosi na ị ga-egosipụta pọtụfoliyo ọkachamara gị, ogo, nkwenye, foto na vidiyo.
Ahịa nwere ike ịmepụta ngwaahịa, ọrụ, Fim na nyocha na ibe azụmahịa gị iji nyere gị aka iwulite ntụkwasị obi ma na-adọta ndị ahịa ọhụrụ.
N'ọdịnihu dị nso, Webtalk ga-enye ọrụ nyocha ahịa ahịa iji nyere ndị ọrụ niile aka ịchọta ngwaahịa ndị ndị ọzọ na-enye ma na-emekwu azụmahịa na mpaghara.
Webtalk chọrọ inyere onye ọ bụla aka jikọọkwuo ohere ma nwekwuo ọganihu.
Ya kpatara Webtalk na-akwụ ụgwọ ruo nchịkọta 50 nke ego niile site na ntinye akwụkwọ ntinye aka nke ukwuu Social CPX.
Webtalk site na ntinye ego sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi, nkwalite mmemme nke oma, ngwangwa aka oru na ugwo ego dika ndi ozo ma ihe di iche bu: anyi keere ya na gi.
Mgbe ị debanyere aha na Mgbakwunye mmemme ị ga - enweta ọrụ 10% na ego niile ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ị na - ezo aka Webtalk maka ndụ.
Kacha mma akụkụ banyere Mgbakwunye mmemme ikwesighi igbanwe ihe omume gi kwa ubochi.
Gwa foto gị, vidiyo na faịlụ na ndị na-abụghị ndị òtù gị ma nweta ụgwọ ọrụ maka Ntuziaka mgbe ha debanyere aha ha.
Ọ bụ na mfe!
Ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ndị na-esonyere Webtalk na mbido ma nyere aka na-eto eto ga-enwe ohere kachasị ego.
Categories Banyere Webtalk, Banyere webtk.co Tags Brazil Real, Entertainers, Ịzụ ahịa ahịa, Marketing, Ndị na-egwu egwú, Ndị na-abụ abụ, Dollar US, Usher Hapụ ikwu Mail igodo
Webtalk Akụkọ Mmelite site na RJ Garbowicz - 2019-05-15
Betty McGuire: 3 Nde Fans na-echere gị na Webtalk!
Home - Banyere Webtalk - WEBTALK INVITE: ⚠️ Guo nke a tupu ịdebanye aha gị! ⚠️